रसुवाकाे सम्बृद्दि र विकासका लागि मेरो उम्मेदवारी : जनार्दन ढकाल | langtangnews.com
२०७४ मंसिर १० गते मुलुकले नयाँ संविधान प्राप्तिपछि देशमा पहिलो पटक संघ र प्रदेश सभाको निर्वाचन हुदैछ । नेकपा (एमाले)-नेकपा (माओबादी केन्द्र) को संयुक्त गठबन्धन, वामगठबन्धन भएपछि यी दुई शक्तिको तालमेलमा उम्मेद्वारहरू चुनावी मैदानमा छन् । रसुवा जिल्लाको संघीय प्रतिनिधि सभामा गठबन्धनको तर्फबाट नेकपा (एमाले) का नेता तथा पूर्व सांसद जनार्दन ढकाल चुनावी मैदानमा छन् । संबिधान जारी गर्ने कार्यभार पुरा गरी जिल्लाको विकासमा महत्वपूर्ण थालनी गरेका ढकाल र उनको गठबन्धनको बाँकी योजना पुरा गर्ने लक्ष्यका साथ रसुवाको चुनावी मैदानमा होमिएको बताउने उनै ढकालसँग लाङटाङ न्युज डटकमले गरेको कुराकानी :
संघीय प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि उम्मेदवार बन्नुभएको छ, कस्तो अनुभव गरिरहनु भएको छ ?
नेकपा (एमाले) सिंगो पार्टीले एकमतले मलाई प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्ष उम्मेदवार सिफारिस गरेको थियो । वामगठबन्धन भएपछि पनि केन्द्रबाट सर्वसम्मत रूपमा मलाई उम्मेद्वार बन्ने अवसर प्राप्त भयो, यसको लागि म पार्टी र गठबन्धनलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु । २०७० मा निर्वाचित भएर गएपछि मैले संविधान निर्माणको कार्यभार पुरा गरेँ, त्यो सबैलाई जगजाहेरै रहेको विषय हो । अबको समय भनेको संविधान कार्यान्वयन गर्दै विकास निर्माण गर्ने, जनताको अधिकार स्थापित गर्ने र जनताको जीविकोपार्जन सुधारका लागि विभिन्न कार्य गर्ने समय हो, अहिलेको उम्मेद्वारी ती विषय प्राप्ति गर्नका लागि, २०७० पछिका बाँकी कार्यभार पुरा गर्ने हो, यो पटकको उम्मेद्वारीले मलाई अझ बढी जनताप्रति उत्तरदायी बनाएको छ, जिल्ला र जनताको भविष्य बनाउने मार्गमा म ऊभिएको छु भन्ने अनुभूति गरिरहेको छु । मेरो काँधमा ठूलो जिम्मेवारी थपिएको अनुभव गरेको छु ।
निर्वाचनलाई केन्द्रित गरी कस्ता गतिविधि भइरहेका छन् ?
रसुवाली जनताको घरदैलोमा पुगेर वामगठबन्धनलाई भोट माग्ने अभियानमा छौँ । हामीले जनताको घरमै पुगेर भोट मात्रै मागेका छैनौँ । बदर नहुने किसिमले भोट हाल्नको लागि मतदाताहरूलाई सुसूचित पनि गरिराखेका छौँ । सँगसँगै बस्ती बस्तीको विकासका लागि त्यहाँ के गर्न सकिन्छ भनेर हामीले यस अघि नै नियाली सकेका छौँ । रसुवाको गाउँ, पाखा, पखेरोलाई उज्यालो बनाउनको लागि हामीले देखेका सम्भावित विकासका सूचकहरूलाई वामगठबन्धनको योजनामा समावेश गरेका पनि छौँ ।
रसुवाका वामगठबन्धनका उम्मेद्वारहरूलाई जिताउन महिला, विद्यार्थी, युवा, शिक्षक, किसान, मजदुरहरू छुट्टाछुट्टै र संयुक्त अभियान पनि सञ्चालन भईरहेको छ । सबै गाउँ र वस्तीबाट मतदाताहरू वामगठबन्धनलाई मत दिन तयार पनि छन् र उहाँहरूलई तयार पार्ने अभियानहरू भईरहेका छन् । चुनावी प्रचार प्रसार अभियानलाई पनि व्यापक बनाइएको छ । विशेषत अहिलेको सामाजिक सञ्जाल र अनलाईन मार्फत् संसारभर पु¥याउने अभियानलाई पनि सँगै अघि बढाइएको छ ।
निर्वाचनमा तपार्इँ विजयी बन्ने आधार के के हुन् ?
२०७० सालमा विजय भएर गईसकेपछि संविधान निर्माणमा निर्वाह गरेको भूमिका, साना साना मात्र योजना भित्रिने जिल्लामा करौडौं रूपैयाका थुप्रै योजना कार्यान्वयन गरिसकेको र केही योजना क्रमागत रूपमा रहेका छन्, भूकम्पको समयमा खोज, उद्दार, राहत र व्यवस्थापनमा खेलेको भूमिका, २०७० देखि स्थानीय तहसम्म एमालेले प्राप्त गरेको जेष्ठ मत, माओवादी केन्द्रको तालमेलमा थपिएको मत हाम्रो चुनाव जित्ने प्रमुख आधारहरू हुन् । त्यो सँगसँगै वामधारमा रहेका नयाँशक्ति काङ्ग्रेससँगको तालमेलका कारण उनीहरू वामगठबन्धनमा समाहित हुने प्रकृया पनि बढेको छ, यसले अझ हाम्रो जितलाई सुनिश्चित गरेको छ, संघ र रसुवाका दुबै प्रदेश वामगठबन्धनको किल्ला बन्ने पक्का छ ।
यी आधारसँगै एमालेले देशमा नौ महिने सरकार चलाउँदा कति विकास गरेको थियो भन्ने मुल्याङ्कन जनताले गरेका छन् । बृद्धाबृद्धालाई भत्ताको व्यवस्था, आफ्नो गाउँ आफैँ बनाऊ, भन्ने जस्ता कार्यक्रम लोकप्रिय छन् । वामगठन्धनले पार्टी एकीकरणको रूप पाउने भएकाले पनि हामीप्रति जनलहर बढेको हो ।
२०७० सालमा निर्वाचन लड्दै गर्दा जारी गर्नुभएको घोषणा पत्रमा के के विषय मुख्य थिए र कति पूरा गर्नुभयो ?
त्यतिखेरको घोषणा पत्रमा मुख्य त संविधान निर्माण र जारी गर्ने कुरालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको थियो, त्यो पुरा भएको छ । युवाहरूलाई रोजगारी दिने विषय पनि प्राथमिकता नै परेका थिए, त्यसका लागि हामीले ६०० को हाराहारीमा युवाहरूलाई विभिन्न ठाउँमा रोजगारीमा लगाएका छौं, घोषणापत्रमा उल्लेख भएका सबै विषयलाई सम्बोधन गर्न सकिएको छैन । साँढे दुई वर्षको समय संविधान निर्माणमा नै बित्यो, लगभग साँढे दुई वर्षको समय पनि अत्यन्त संक्रमणकालीन अवस्थामा रह्यो, भूकम्पसँगै नाकाबन्दी हाम्रा लागि बाधक बनेर आयो, सो को व्यवस्थापनमा हामीले प्रमुख भूमिका निर्वाह गरेका छौं । तर हामीले गर्नुपर्ने धेरै काम अपुरा छन् । त्यसको पुरा गर्ने दिन अब आउने हामी विश्वस्त छौं ।
जिल्लाको समग्र विकासका लागि गठबन्धनले कस्तो रणनीति तयार गरेको छ ?
हामी रसुवालाई विकासको नयाँ रूप दिन सक्छौँ । हामीसँग जिल्लाको विकासको लागि स्पष्ट योजनाहरू छन् । हामी जनतालाई सँगै साथ लिएर जिल्लाको समग्र क्षेत्रको विकास गर्नेछौँ । यहाँको जलविद्युत क्षेत्रको विकास गर्ने हो भनेपनि ५ वर्ष भित्रमा जिल्लाले नयाँ रूप पाउनेछ । अर्को कुरा यो जिल्ला छिमेकी मित्र राष्ट्र चीनसँग सीमाना जोडिएको जिल्ला पनि हो । त्यसकारण पनि यहाँ विकासका धेरै सम्भावनाहरू छन् । अन्तर्राष्ट्रय नाकाको रूपमा विकास हुँदै गरेको रसुवागढी नाकाको व्यवस्थापन, यहाँ हुने गरेको अवैध व्यापारको अन्त्य गर्नु अत्यन्त आवश्यकता छ ।
यहाँको शैक्षिक क्षेत्रको विकास, स्वास्थ्य क्षेत्रको विकास, सडक, पुल, जडिबुटी क्षेत्रको विकास गर्ने हाम्रो प्राथमिकतामा पर्नेछ । रसुवा पर्यटनको लागि नेपालको तेस्रो गन्तव्य हो । यसको उचित प्रवद्र्दन हुन सकेको छैन यसको लागि हामी काम गर्नेछौँ । लाङटाङ मात्र होइन तामाङ सम्पदा मार्गको विकास र यार्सा जस्तो विकट बस्तीमा पनि पर्यटन प्रवद्र्दन गर्ने हाम्रो लक्ष्य छ । साथै युवाहरूलाई जिल्लामै रोजगारीको सृजना गरि जिल्लाको विकासमा लगाउने योजना हामीले ल्याएका छौँ । यहाँको गोसाइँकुण्ड, लाङटाङ, साङ्जेन, टिमुरे जस्ता पर्यटकीय स्थलहरूका राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय तहमा व्यापक प्रचार–प्रसार गरी यस्ता क्षेत्रको उचित विकास गर्ने र स्थानीयलाई स्वरोजगारमा सहयोग गर्नेछौँ ।
तपाई निर्माण व्यवसायी पनि हुनुहुन्छ, व्यवसाय र राजनीति दुबैलाई कसरी लानु भएको छ ?
२०७० मा निर्वाचित हुनु अगाडि देखि नै मैले राजनीति र निर्माण व्यवसायलाई सँगै व्यवस्थापन गरेको लगेको छु । पछिल्लो चरण जनताले दिनुभएको जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने क्रममा निर्माण व्यवसायमा पूर्ण रूपमा लागेको छैन, अरूलाई जिम्मेवारी दिएको छु । कुनै पनि व्यक्ति कुनै आर्थिक उपार्जन विना जिउन सक्दैन, कोही होटल व्यसाय गर्छन्, कोही जागिर खान्छन् त कोही केही गर्छन् । म निर्माण व्यवसायी हुँ । निर्माण व्यवसाय एउटा नाफामूलक र सेवाप्रदायक हो र राजनीति भनेको जनता र गाउँको विकासका लागि सेवा गर्ने कार्य हो । राजनीति कमाउने हैन । आफूले अन्य व्यवसाय गरी कमाएको आर्थिकले राजनीतिमार्फत् जनताको सेवा गर्ने हो । व्यवसाय र राजनीतिबीच अन्यान्योस्रित सम्बन्ध छ । जनतामा जानको लागि पनि आर्थिक अवस्था राम्रो नै चाहिन्छ ।
चुनावी मैदानमा प्रतिष्पर्धिको रूपमा तपाई भन्दा बलिया निर्माण व्यवसायी आएका छन्, तपाईलाई अलि गार्हो छ भन्छन् नि ?
लोकतान्त्रिक गठबन्धनका उम्मेद्वार बलिया छन् भन्नु भयो, आर्थिक रूपमा बलियो हुनुहोला तर राजनीतिक हिशावले हामी बलिया छौं, संगठन र जनाधारका हिसावले नेकपा (एमाले) हिजो देखिकै बलियो पार्टी हो, माओवादी केन्द्रसँगको गठबन्धनले झन् बलियो हामी नै छौं । हामीलाई निर्वाचन जित्नका लागि कुनै गार्हो छैन, हामीले गरेका काम र जनताको विश्वासले गर्दा ।
सर्वप्रथम त जिल्लाको विकासको सूचक त योजना हो, त्यसका लागि हामीले केही तय गरिसकेका छौं । मुख्य गरी पर्यटन, रसुवागढी नाका, जलविद्युत, जडिबुटी खेतीको विकास रसुवाका प्रमुख विकास सूचकहरू हुन् । यसको समुचित विकास हुन सकेमा जिल्लाको विकास हुने छ ।
निर्वाचनको संघारमै आइपुग्दा आम रसुवाली मतदाताहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ ?
नयाँ संविधानको कार्यान्वयन र जिल्लाको समुन्नत विकासका लागि यसपटक प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा १ मा सूर्य चिन्हमा तथा प्रदेश सभा २ मा गोलाकार भित्रको हँसिया हथौडा चिन्हमा मतदान गरी रसुवा वामगठबन्धनलाई विजय गराउन आम रसुवालीलाई अनुरोध गर्दछु । जिल्लाको विकास तथा विविध कार्यमा हामी संलग्न भइरहदा कतै अल्मलिए, बाटो बिराए सच्याइदिन पनि अनुरोध गर्दछु । संविधान सभाको निर्वाचन पछाडि वामगठबन्धनले जितेपनि हारेपनि जिल्लामा गर्न सकिने विकासहरू के हुन्छन्, तपाइँको आफ्नो ठाउँबाट उज्यालो रसुवा बनाउनको लागि विकासका योजनाहरू हाम्रो गठबन्धनमा ल्याउनुहोस् । स्थानीय सरकार वामपन्थीको भइसकेको छ, वामगठबन्धनको तर्फबाट गर्न सक्ने सहयोग सदैव गर्न तयार छौं ।